zviwanikwa zvezimbabwe | Kwayedza
27 Jul, 2018 - 00:07	 2018-07-26T15:59:51+00:00 2018-07-27T00:01:16+00:00 0 Views
Juliet Sharon Tom
NGWARATI imwe yemhuka dzemuAfrica dzinoyevedza nokuda kwenyanga dzayo refu idzo dzakatesva dzichinongedza kushure.
Mhuka iyi ine mutsipa neganda rakasimba, iine mvere refu dziri panyundwa.
Paruvara, bhuru rengwarati idema, riine pasi pachena — kubva pasi pemuromo kunosvika kumuswe. Hadzi nemhuru dzacho dzine hutema hwakapfumburuka nedumbu jena.
Kumeso kwayo kuchena asi kwakakamurwa nemutsetse mutema. Mhuka iyi ine nzeve nhete asi dzakareba.
Ngwarati inoreba kubva 190 kusvika 255 cm — rume dzakadarika hadzi. Pahuremu, dzimwe dzinosvika 270 kgs. Ine muswe ungaita 75 cm uyo une pfunha kwekupedzisira.
Ngwarati dzose — rume nehadzi — dzine nyanga refu.
Mhuka idzi dzinowanzogara munzvimbo dzine miti nehuswa hurefu. Ngwarati inorarama nekufura huswa asi inogonawo kurarama nemashizha emiti, kunyanya apo kunenge kusinganaye. Dzinonwa mvura kakawanda.
Mhuka idzi dzinowanzogara dzakawanda kuita “danga” rine mhuka gumi kusvika 30 kana kutodarika. Dzinofarira nguva dzemangwanani nekumanheru.
Kana yavhundutswa, ngwarati inongomhanya chinhambwe chipfupi, yomira ichicheuka. Asi kana yonyatsotiza, ngwarati inomhanya 57 km/h.
Inoita zamu kwemazuva 270 kana yava nemakore maviri kana matatu ekuberekwa apo inozobara mhuru imwe chete.
Munhu nekusanduka kwenharaunda ndizvo zvinhu zvaparadza mhuka idzi. Naizvozvo, veruzhinji vanokurudzirwa kuti vasiyane nekuvhima mhuka iyi iyo inozivikanwa nekurwa. Ndokusaka zvichinzi, “Kurwa sengwarati.”
◆ Zvimwe zviri muchinyorwa chino:
Field Guide to Mammals of Southern Africa – Chris and Tilde Stuart
Wild Mammals (Bundu Series) – Dale Kenmuir and Russel Williams
The Complete Guide of Southern African Mammals – Gus Mills and Lex Hes
. Kuti muzive zvakawanda batai veZimparks Public Relations pa: 0772 620 178.